Tag: fitantanana fananana | Martech Zone
Tag: fitantanana fananana
Talata, Aprily 25, 2017 Alarobia, Aprily 26, 2017 Douglas Karr
Hightail dia namoaka ny valin'ny fanadihadiana State of Creative Collaboration voalohany. Ny fanadihadiana dia nifantoka tamin'ny fomba fiaraha-miasa amin'ny ekipa marketing sy famoronana mba hanaterana ireo tendrombohitra misy atiny am-boalohany ilaina hitarika fampielezan-kevitra, hanomezana valin'ny orinasa ary hampitombo ny varotra sy ny vola miditra. Ny tsy fahampian'ny loharanon-karena sy ny fangatahana mitombo dia manimba ny famoronana miaraka amin'ny famoahana atiny ateraky ny indostria rehetra, ny filàna atiny tsy manam-paharoa, manery, mampahalala ary manana kalitao avo lenta ankehitriny. Ny algorithman amin'ny fikarohana dia mitaky
Amin'ny maha marika manerantany anao dia tsy manana mpijery manerantany ianao. Ny mpihaino anao dia misy mpihaino isam-paritra sy eo an-toerana. Ary ao anatin'ny tsirairay amin'ireo mpijery ireo dia misy tantara manokana azo raisina sy hotantaraina. Ireo tantara ireo dia tsy miseho majika fotsiny. Tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra hikarohana, hisambotra ary hizara azy ireo. Mila fifandraisana sy fiaraha-miasa izany. Rehefa mitranga izany dia fitaovana matanjaka mampifandray ny marikao amin'ny mpihaino manokana anao. Ka manao ahoana ianao